Otu esi ahoputa onye na enye oru email | Martech Zone
Izu a ka m zutere otu ụlọ ọrụ na-eche echiche maka ịhapụ email na-eweta ọrụ ha na-ewu ụlọ email sistemụ n'ime. Ọ bụrụ na ị jụọ m afọ iri gara aga ma ọ bụrụ na ọ bụ ezigbo echiche, agaraghị m ekwu. Agbanyeghị, oge agbanweela, teknụzụ nke ESP dị mfe iji mejuputa ma ọ bụrụ na ị maara ihe ị na-eme. Ọ bụ ya mere anyị ji mepụta CircuPress.
Gbanwee na Ndị Na-enye Ọrụ Email?
Nnukwu mgbanwe ESP nọ na ịnapụta ya. Ọ bụghị n’ezie ndị ESP gbanwere, ọ bụ ndị ISP. Ndị ọkachamara na-anapụta ozi email na nnukwu ESPs na-eji kọntaktị na ndị na-eweta ọrụ tontanetị arụ ọrụ iji dozie nsogbu ma hụ na e nwere ezigbo nnweta. Ka oge na-aga, ndị ISP emechiela ọfịs ndị ahụ ma tụgharịa na algorithms iji nyochaa aha onye zitere ha, nyochaa ọdịnaya, igbochi ma ọ bụ ịnabata email, ma ziga ya na nchekwa SPAM ma ọ bụ igbe mbata.
Buru n'uche na iwepụta gị apụtaghị ịbanye na igbe mbata! 100% nke ozi ịntanetị gị nwere ike ịga nchekwa nchekwa, nke ahụ ruru 100% ịnapụta. Ma ma ị na-eji ESP enyeghị gị ohere ọ bụla ka mma iji rute igbe mbata ma ọ bụrụ na ịmara ihe ị na-eme. Anyị na-eji 250ok iji nyochaa ntinye igbe igbe anyị na aha.
E nwere àgwà akọ na Ndị Na-enye Ọrụ Email na-enye na ị gaghị achọ ịmegharị n'ime, ọ bụ ezie. Ga-enyocha ọnụ ahịa mmepe maka ego ọrụ email ahụ. N'uche nke m, mgbe ịmalitere izipu ọtụtụ narị puku ozi ịntanetị kwa ọnwa, ị nwere ike chọọ ileba anya na nhazi nke gị.
Speed - Ọ bụrụ na ị na-eziga ọtụtụ nde ozi ịntanetị otu ụbọchị, na-emepe emepe akụrụngwa nke ụlọ ọrụ dịka Salesforce ExactTarget nwere ike ọ gaghị enwe ezi uche. Ha nwere ike wepu ọtụtụ ijeri ozi ịntanetị na-enweghị ntabi anya.
Ịmara - Ọ bụrụ n’inweghị ndị ọrụ aka ma ọ bụ nwee nnukwu ijide aka site na okike na ogbugbu nke usoro ịre ahịa email gị, ị chọghị iwulite ihe nke gị. Nwere ike ịrụ ọrụ na nnukwu ụlọ ọrụ dịka Delivra onye na - enye ndi ahia ahia.
Ibiaghachi Management - Nyefee email adịghị mfe dịka izipu email. Enwere ọtụtụ ihe mere ozi ịntanetị ji agbaba na ị ga-ewu ma jikwaa usoro maka ikpebi ma ị ga-ezigaghachi email ahụ ma ọ bụ wepu aha onye nnata email ahụ.
SPAM Nkwado Iwu - Enwere iwu dị iche iche n ’ụwa niile nke na-achịkwa ojiji nke email maka ịrịọ arịrịọ azụmahịa. Ijide n'aka na ị na-ekwenye ekwenye nwere ike ịchekwa gị ọtụtụ isi ọwụwa.
Design - you chọrọ tupu mere anabata email ndebiri ma ọ bụ aghụghọ? Ma ọ bụ ị chọrọ ịdọrọ na dobe imewe? Ma ọ bụ ị chọrọ ọdịnaya dị elu na njikọta ntinye aha na email gị? Ga-achọ iji hụ na gị ESP nwere ngwaọrụ na ike ị chọrọ iji hazie ma zipu ozi ịntanetị nke ọma.
Ndị Ndenye aha ha - mmasị ọdịnaya, ụdị ndenye aha, na ebe a na-edebanye aha bụ ihe dị mkpa iji nweta ma hazie ozi email maka ndị debanyere aha.
API - youchọrọ ijikwa ndị debanyere aha, ndepụta, njikọ, na mkpọsa na mpụga ESP? A siri ike API dị oke egwu.
Njikọ nke atọ - Ikekwe ịchọrọ ijikọta na shelf gị sistemụ njikwa ọdịnaya (CircuPress nwere nke a na WordPress), a Usoro Mmekọrịta Ndị Ahịa, ikpo okwu E-Azụmaahịa ma ọ bụ sistemụ ndị ọzọ.
akuko - pịa-site udu, A / B ule, ndetu njigide, nsụgharị ntụgharị, na akụkọ ndị ọzọ siri ike na-akọ banyere ha n'ụzọ zuru ezu email metrik ga - enyere gị aka ịbawanye uru nke mmemme ahịa email gị. Gbalia inyocha na itule atụmatụ nke ESP obula.
Ma n'ezie, ịnye ọnụahịa bụ isi! Anyị anaghị ahụ nnukwu nnukwu ọdịiche dị n'etiti atụmatụ dị n'etiti ọtụtụ ndị na-eweta ọrụ email kachasị elu n'ahịa ma e jiri ya tụnyere obere ESP. Y’oburu n’inwere ike wedata njiri mara n’elu nke di nkpa n’ebe nzukọ gi di, mgbe ahụ echere m na ịzụ ahịa na ọnụego nwere ezi uche. Ma ọ bụrụ na ị na-eziga ọtụtụ nde ozi ịntanetị, ọ nwere ike ịbụ ihe ezi uche dị na itinye ọnụ na ndị ọzọ dị ka SendGrid, ma ọ bụ ọbụna rụọ usoro nke gị.
Tags: 250oknwere ike-spamcircupressemail apiemail ibiaghachi njikwaemail imeweemail nkaozi infographicemail mwekotaozi zipu ọsọọrụ emailonye na-enye ọrụ emailemail spam nnabatanjikwa ndebanye aha emailemailmonksespotu esi ahutaiwu spamnjikwa ndebanye aha